❄️HappyWinter❄️Yiza uhlale kwi-bucolic yethu ye-1700's yokuTyalwa kweCuba. Izindlu zethu zibonelela ngoncedo lweendawo zokuhlala ezirentwayo kunye nembali kunye ne-adventure! I-oasis yelizwe lethu elinoxolo yeyona ndawo ifanelekileyo yokubalekela kubomi besixeko. Vuka kwizandi ezizolileyo zendalo kwaye ube nekofu engaphantsi kwekhulu le-oki leminyaka ubudala. Hamba iindlela kwipropathi yethu, ndwendwela izilwanyana zethu okanye uphume kwintsimi yeediliya utsibela kwiindawo ezimbalwa zewayini. Sihamba ngokufutshane ukusuka kwi-95 kunye ne-85
Iimbono zobufundisi kunye nezandi zobomi basefama. Igumbi elinye lokulala elinebhedi enkulukazi kunye namashiti ahlambulukileyo, igumbi lokuhlambela eligcweleyo, ishawari ehamba ngethayile, ikhitshi elinefriji, i-oven yesitovu esiphezulu, i-microwave, umenzi wekofu, iketile yamanzi ashushu, i-blender, i-toaster, kunye neeseti ezine ezipheleleyo zeeglasi zeepleyiti, iindebe, neeflethi zesilivere, neempahla zonke zokupheka, neembiza, neepani. Udonga luxhonywe kwi-Smart TV ngeAmazon Fire Stick ukuze ukwazi ukufikelela kwiinkqubo zakho ozithandayo ngeNetflix, iAmazon Prime okanye iYouTube. Ifakwe kakuhle ngesofa yesikhumba, itafile yezihlalo ezine zecafe, kunye ne-intanethi engenazingcingo. Iifeni ze-Ceiling kwigumbi ngalinye. Indawo yomlilo yegesi esebenza kude kwigumbi lokuhlala. Ukukhanya okukhulu kwendalo kwigumbi ngalinye kunye neengcango zaseFransi kulo lonke. Iveranda yangaphambili ineefeni ezimbini zesilingi kunye nefenitshala ye-wicker yokuhlala. Kukwakho netafile enesitayile secafe yokuhlala kunye nezitulo kwiveranda engaphambili ngokunjalo. Kumgangatho ongasemva kukho igrisi yegesi eneseti epheleleyo yezixhobo zokugcoba. Ipropane inikezelwe. Iiambrela zomthunzi kunye netafile yepatio ehlala ezine.
Iimayile zeendlela zokuhamba ngasemva ezinemilanjana ehamba ecaleni kwemithombo yethu yezimbiwa kuyo yonke indawo yethu. Bulisa kwizilwanyana zethu-Silikhaya kwiinkukhu ezininzi ezingaqhelekanga, iibhokhwe zePygmy, iibhokhwe zobisi, iihagu ezincinci, amahashe kunye neePyrenees ezininzi.
Qaphela: Sineentlobo ngeentlobo zeenkuku ezintle, ezingaqhelekanga ezivelisa awona maqanda anencasa. Wamkelekile ukuba uzithenge ngeshumi elinesibini le-$6 okanye isiqingatha se-$3. Yazisa umamkeli ukuba unqwenela ukuthenga amaqanda ngexesha lokuhlala kwakho!
Siyakuthanda ukuhlala apha ngenxa yendawo ekude, inzolo enikezelwa yipropathi yethu. Sikude nesiphithiphithi sesixeko kunye nengxolo yogqatso lweemoto. Iihektare kunye neehektare zomhlaba oMhle, umoya ococekileyo kunye neendawo ezivulekileyo! Yiyo loo nto siyithanda apha!
*Sinika iindwendwe zethu indawo kodwa ziyafumaneka xa zifuneka*
Siyifama exakekileyo esebenzayo. Uya kuhlala usifumana sijikeleze ipropathi sisonwabela okanye sisenza imisebenzi yasekhaya. Sikhuthaza ukusetyenziswa kwe-self check in guide. Sifumaneka ngomoya bnb imiyalezo okanye umyalezo obhaliweyo. Konwabele ukuhlala kwakho! UGavin kunye noJessica
Siyifama exakekileyo esebenzayo. Uya kuhlala usifumana sijikeleze ipropathi sisonwabela okanye sisenza im…